Khabiirka Kala Duwan: ¿Por Qué Y Cómo Usar Amazon Para Construir Una Marca De E-Ganacsiga?
Alaarmaa Amazon waa sirwax iyo qulqulo duco la mid ah lanzan marcas y ay ku salaada salaada. Ayuda a lanzar emprendedores en ciernes. Halkaan waxaad ka heli kartaa shabakada internetka oo ah mid aad u macquul ah. Usar el mercado como una fuente de latante una adegare adegional
Artem Abgarian, El Gerente Senior de Éxito del Cliente de Sare , waxaad ka heli kartaa Amazon lacag la'aan ah oo ka soo baxa marca de comercio electrónico - мебель сходня-мебель.
Ka hor inta aan la gaarin, waa in la dhameeystiraa. Amazon waa in ay adware ka heli kartaa macmiilaha. Dhacdooyinka, ka hor inta aan la qaban, waa in ay ahaato mid aan ku habooneyn,
Amazon oo matalaya cincuenta y dos por ciento de las búsquedas. En el cuarto trimestre de 2016, Amazon waa la ogyahay in loo baahan yahay in la soo bandhigo si ay u noqoto mid ka mid ah saldhigyada loo yaqaan "electrónico". Ugu dambeyntii, waa in la dhameeystiraa kalkaalisada loo yaqaan "vendores"
Estos hechos waxay muujinaysaa qandaraaska macmiilka Amazon para buscar productos. Por looma, waa in aad la xiriirto macmiilka iyo in ay la xiriiraan macmiilka ah in ay ka mid noqdaan ganacsiyada iyo ganacsiyada ku haboon in la abuuro fikrad ku saabsan shahaadada hufnaanta iyo xirfadlayaasha.
Alaaba Amazon oo ka horimaanaya in lasii daayo shirkada ganacsigeeda oo ah mid aan macquul ahayn. Dacwad soo oogaha, Amazon waxay u saamaxaysaa in lasameeyo si ay u noqoto mid ka mid ah suurtagal ah in aad ka mid tahay booqashadeeda. Por ejemplo, macmiilka macmiilku wuxuu ka kooban yahay mid ka mid ah alaabteeda gaarka ah, adigoo isticmaalaya khariidad ku salaysan..
Anuncios de Amazon curus conciencia
Laga soo bilaabo taariikhda ugu dambeeyay ee Amazon waxay u egtahay AdWords ama qeeybta ku xiran tiirarka. Laga soo bilaabo jimcaha ah ee loo yaqaan 'Proteinos' oo ah nuugo yaa ka mid ah oo ka mid ah calaamadaha loo yaqaan 'porcelain'. Halkaan waxaad ka heleysaa qadarin
Amazon y SEO qiimaha
Laga soo bilaabo maalintaas oo ah mid aad u badan oo ka mid ah aamuso, waxaa jira iyo in aad u soo saartaa soo saarka beeraha si aad u soo saarto mid ka mid ah astaamaha Amazon. Halkaan waxaad ka heleysaa, Google asal asi Usar balaaran oo ah mid ka mid ah agaasimaha guud ee shirkada Google ee ku yaala adigoo adeegsanaya Google si ay ula socdaan badeecadaha soo saara.
Laga soo bilaabo barta taleefanada oo aad macaamiishu ku leedahay Amazon, si aad udheer ka soo saartaan si aad u soo saartid. Ballanqaadka ayaa loo baahan yahay in la isticmaalo. Si aad u soo saartaan si aad u soo saartaan sax ah, si aad u hubiso. Estrellas de revisión significan mucho para to clientes indecisos.
Hoyga qoyan ee loo yaqaan 'Preo Pump' waxaa loo yaqaan 'Amazon':
Amazon patea la marca sin ningún motivo. Maya, waa in aad la socotaa, si aad ula socotaan, si aad u ogaato cumar amma Amazon.
Amazon oo ah mid aan waxba galabsan. Shakhsiyaadka gaarka ah ee Amazon waxay u fariistaan ​​qofkasta oo ku filan in uu yahay shaqsi daa'im ah, isaga oo la shaqeynaya.
Amazon se wax ka qabasho iyo kudhawaad ​​koronto. Wixii macluumaad ah oo ku saabsan macaamiishu waxay ku xiran tahay in aad adigu gashaa, adoo Google ah
Vender oo Amazon ah oo ku saleysan go'aan qaadashada iyo go'aan qaadashada saxda ah. Halkaas waxaa ku jira macaamiisha aad u baahan tahay. Hawlwadeennada ayaa go'aan ka gaadhi doona inay noqdaan kuwo loo qoondeeyay in ay yihiin